ရီရလွန်းလို့ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
April 18, 2009 by ကုမ်ရာသီသူ
ဒီဗီဒီယို ကလစ်ကို စကြည့်တုန်းက အဲဒီလောက် ရီရမယ် မထင်ထားမိဘူး။ ရီရင်းနဲ့ မျက်ရည်တောင် ထွက်တယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ ရယ်မောရင်း ဘ၀အမောတွေကို ဖြေဖျောက်ချင်သူတွေအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ MetaCafe ကနေ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ထားတတ်တဲ့သူကို တကယ် ကျေးဇူးတင်မိပါရဲ့ ။ အဲဒီလို ဗီဒီယိုလေးတွေလည်း ရှာတတ်ရင် ရှိဦးမယ်ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့် Metacafe ကနေ တိုက်ရိုက် တင်လို့မရလိုက်လို့ နှစ်မျိုး စမ်းကြည့်တယ်။ Media Fire မှာ အရင် သိမ်း၊ ပြီး အဲဒီက link ကို ပြန်ထည့်တာရယ်၊
(ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာနဲ့ အဲဒီနည်းလမ်းက မအောင်မြင်လိုက်ဘူး 😦 )
Youtube မှာ သွားပြီး Upload လုပ်တာရယ်ပေါ့။
ကွန်ပျူတာကနေ တိုက်ရိုက် မတင်တာက ကြာတာရယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ ဘယ်အချိန် ပျက်မလဲ မသိတာရယ်ကြောင့်ပါ။ အလကား ရမယ့် File Hosting တွေ လိုက်ရှာပြီး သိမ်းတတ်တာအကျင့်ဖြစ်နေပြီလေ။ 😀
စာကြွင်း။ ။ တကယ်တော့ သူများလို နှစ်သစ် ဆုတောင်းတွေ ဘာတွေ တောင်းပေးဖို့က ကိုယ်တိုင် အရှုပ်တွေလုပ်၊ အလုပ်တွေရှုပ်ရင်း မေ့နေတာ။ နှစ်သစ်မှာ ရယ်စရာလေး တစ်ခုခုနဲ့ ဖွင့်ချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးတင်လိုက်တာပါ။ အားလုံး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစွာနဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged funny. Bookmark the permalink.
← April Fool-နောက်ဆက်တွဲ
4 thoughts on “ရီရလွန်းလို့”
MrDBA | April 18, 2009 at 10:32 am
ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးတယ်ဗျ။ အများကြီးရှိတယ် လေးငါးပုဒ်လောက်ရှိတယ်ဗျ။ တော်တော်သေချာလုပ်ထားတာ။ ရီရတယ်။
pm | April 18, 2009 at 11:45 am
ရီရလွန်းလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း တော်တော်လေးကို ရီမိသည်။
ကုမ်ရာသီသူ | April 19, 2009 at 2:43 am
Bro. DB >> အဲဒီ MetaCafe ထဲမှာတော့ တွေ့တယ်ဗျ။ သူငယ်ချင်းတွေ သိနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ခုမှ သတိ၇လို့ ပြန်ရှာပြီး တင်လိုက်ရတာ။ တော်တော်ကို ကွက်တိကိုက်အောင် လုပ်ထားတာ အမှန်ပဲ။ နောက်ထပ်တွေ့ရင်လည်း Bro. စာမျက်နှာမှာ မျှပါဦးဗျ။ (ကြုံတုန်း ပွဲတောင်းလိုက်ဦးမယ် 🙂 )
PM >> ရီအောင်တင်ထားတာ ရီမိသည်ဆိုရင် ၀မ်းမြောက်ပါသည်။ 🙂
exiter | April 21, 2009 at 8:19 am
ဟားဟား တော်တော် ရီရတယ် အူတောင်နာတယ် 😀